Azafady Aza lavo amin'ny mailaka SEO SPAM | Martech Zone
Alakamisy Janoary 16, 2014 Alarobia 15 Janoary 2014 Douglas Karr
Miasa ao anatin'ny indostrian'ny varotra fikarohana, ny fijerena mailaka toy izao dia mahatonga ahy te-hiboridana. Saingy nanana mpanjifa izahay taloha nilaza tamin'izy ireo fa nahazo fangatahana avy amina orinasa SEO mampahafantatra azy ireo fa tsy mitana laharana izy ireo. Alefan'izy ireo amintsika izany ary manontany ny antony?
Andao horavana ity mailaka ity:
Avy amin'i Mark Peterson (maketopseorank@gmail.com). [Gmail? Ka ity lehilahy ity dia tsy miasa amin'ny orinasa manana domain azoko zahana? maketopseorank? tena?]
Salama, [Salama iza? Tsy fantatrao aho, sa tsy izany?]
Manantena fa salama tsara ianao. Ao anatin'ny fikarohana ataon'ny mpanjifanay [AKA - nividy lisitry ny tompona tranonkala izahay], nahita ny tranonkalanao "Marketingtechblog.com" izahay ary nahatsikaritra fa tsy mitana ny laharana amin'ny motera fikarohana lehibe indrindra toa ny Google, Yahoo & Bing ny tranokalanao. [Aiza isika no tsy mitana ny laharana? Laharana faha-1 amin'ny isa an-jatony izahay!] Nanontany tena aho raha toa ianao ka liana amin'ny serivisy fanatsarana motera fikarohana ho an'ny tranonkalanao amin'ny vidiny ambany dia ambany. [Handrara anao ny SEO mora vidy… manameloka ny tompon'ny tranokala izany.]
Ny fanatsarana ny motera fikarohana araka ny tokony ho izy dia hampitombo ny fankasitrahanao ny marika, ny fifamoivoizana an-tranonkala ary hampitombo ny varotrao, izany no antony anananao tranonkala hanombohana marina? [Eny… ary maninona aho no tsy hanao risoriso ny fanaovana raharaham-barotra amin'ny olona tsy mahalala ahy, tsy mahalala ny tranokalanako, tsy mahalala izay laharako, tsy mahalala izay tiako hitoerana, na mahalala izay tena amidiko.]
Azontsika atao ny mampiroborobo ny tranokalanao amin'ny fametrahana ny pejy voalohany amin'ny Google, Yahoo, na Bing ao anatin'ny telo ka hatramin'ny enim-bolana azo antoka miaraka amin'ny fonosana "National SEO". [Guaranteed? Fametrahana pejy voalohany? Afaka manoratra lohahevitra amin'ny zavatra rehetra aho ary mahazo toerana voalohany sasany teny.] Telo na enim-bolana dia mahazatra an'ireo fonosana SEO rehetra misy anay!
Ampahafantaro ahy raha liana ianao ary handefa antsipiriany bebe kokoa aminao izahay, na afaka manomana antso izahay. Safidinao io. Tianay ny hiara-hiasa aminao!
Tsy andriko ny valin-teninao. [Tsara - Mandefa rohy mankany amin'ity lahatsoratra bilaogy ity aho.]
Hey Mark… esory tsy ho ao anaty lisitrao aho ary atsaharo ny fanandramana hanintona olona.
Tags: mailakamaketopseorankSEOseo fangatahana mailakahosoka seoseo spamamin'ny spam
17 Jan 2014 amin'ny 8:31 PM
Lahatsoratra tsara hafa Doug! Tena mampahalala izany .. Misaotra tamin'ny fizarana, namaky tsara aho…
28 Nov 2015 amin'ny 12:26 maraina
Ny mpanjifa tokana rehetra nataoko dia efa nanolotra ahy zavatra toy izao. Fanaintainana ny milaza tsy tapaka amin'ireo mpanjifa mba tsy hiraharaha ireo olona ireo nefa toa tsy dia miezaka mafy aho hitazona azy ireo ho mpanjifa indraindray amin'ny filazako azy ireo fa andiana satroka spam fotsiny izay manery ny bokotra. Soa ihany fa mandefa azy ireo any amin'ny lahatsoratra toy izao aho mba hampisehoana azy ireo, tsy izaho irery no miteny ireo zavatra ireo.
28 Nov 2015 tamin'ny 3:26 PM
Indostria mahatsiravina tokoa io, Nathan!